हेर्नुहोस २०२०मा २९ वर्षपछि शनि ग्रह आफ्नो राशिमा ऑउदै, कुन राशिको चम्किन्छ भाग्य र कुन राशिलाई हानी ! जानी राखौ «
हेर्नुहोस २०२०मा २९ वर्षपछि शनि ग्रह आफ्नो राशिमा ऑउदै, कुन राशिको चम्किन्छ भाग्य र कुन राशिलाई हानी ! जानी राखौ
Published : 25 March, 2020 10:27 am
मानिस दुईवटा ठुला शक्तिकोबीचमा हुन्छ । पहिलो ब्रह्माण्डीय शक्ति, जसमा ग्रह राशि तथा नक्षत्र हरुको प्रभाव नित्य रुपमा परिरहेको हुन्छ भने अर्काे जमिनबाट आउने भू–चुम्बकीय तरङ्ग । यी दुईवटा शक्तिकोबीचमा रहेर मानिसले दैनिक संङ्घर्स गरिरहेका हुन्छन् । कसैलाई थोरै मिहेनत गरे पनि राम्रो परिणाम प्राप्त भईरहेको हुन्छ भने कसैले कडा परिश्रम गर्दा पनि सोचेअनुसार भईरहेको हुँदैन । यदि कर्म मात्रै गरेर सफल हुने हो भने काम गरेका जति सबैजना सुखी तथा आनन्द तरिकाले जीवन बिताउँथे । मानिस सुखी या दुखित् यसको परिणाम उसले गर्ने कर्ममा निर्भर रहन्छ ।
आफूले कस्तो कर्म गरिएको छ, त्यसको फल समयअनुसार भोग्दै जानु पर्दछ । कर्मफलदाता शनिशास्त्रमा शनिकाबारेमा लेखिएका थुप्रै ग्रन्थहरु छन्, जसमा शनिलाई न्यायाधीशका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । शनिको रुप कालो छ, न्यायाधीशको उपाधिका कारणले कहिल्यै पनि शनिले मानिसलाई धोखा दिँदैन, यसर्थ न्यायालयमा कालो कोट र तराजु राखिएको हो, न्यायको लागि । शनिले राम्रो तथा नराम्रो कामको परिणाम तुरुन्तै दिने हुनाले मानिसले शनिकोबारेमा धेरै चासो राख्ने गरेको हो । नवग्रहरुमा हरेक ग्रहले के फल दिने भन्ने कुरा निर्धारित हुनाले शनिले न्याय सम्बन्धि जिम्मा पाएको हो । हरेक मानिसले कति दुख कस्ट भोग्नु पर्छ भन्ने शनिको दशाबाट निर्धारण हुन्छ । नवग्रहमध्ये सबैभन्दा ढिला हिड्ने ग्रहका रुपमा शनिलाई लिने गरिएको छ ।
शनि एउटा राशिबाट पुनः त्यही राशिमा धुमेर आउन करिव २९ वर्ष समय लगाउँदछ । सन् २०२० मा करिब २९ वर्षपछि शनि पुनः आफ्नो घर यानिकि मकर राशिमा आउँदै छ । शनिग्रहलाई दुईवटा घर प्राप्त भएको छ, जुन मकर र कुम्भ राशि हो । यहि २०७६ साल फागुन ४ (फेब्रुअरी १६ तारिख सन् २०२०) मा शनिको राशि परिवर्तन हुँदा यसले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । लामो समय पछि आफ्नो राशिमा प्रवेश गर्ने शनिले नीति र नियमलाई बलियो बनाउनेछ छ। देशमा पनि कानुनका लागि लडाइँ र बहस हुनेछन् ।
गुरु बृहस्पति भन्दा अगाडि रहनाले पनि केही परिवर्तनको संकेत न्याय क्षेत्रमा देखिएको हो । २९ वर्ष अघि पनि शनिले यही राशिमा गोचर गर्दा परिवर्तन भएकाले यसले पनि त्यही कुरा दोहोराउने संकेत देखिएको छ । फागुन ४ पछि शनिको आफ्नो राशिमा परिवर्तन हुँदा करिब अढाई बर्ष देखि चलिरहेको बृष र कन्या राशिलाई शनिको अढैया दशा समाप्त हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका काम कारोबार सुचारु हुनेछन् । मुद्दा मामिलाका सम्पूर्ण कुराहरु सोचेअनुसार नै सफल हुने संकेत देखिएको छ ।यसै समयमा स्थान परिवर्तनको सम्भावना हुने हुँदा राशिअनुसार कता जाँदा ठिक हुन्छ, सल्लाह लिएर निर्णय गरेमा फलदायी हुनेछ । शनिले विदेशी कारोवार गर्ने मानिसलाई बिशेष लाभ दिलाउने छ ।
लामो समय विदेशमा बसेकाहरुलाई भने स्वदेशीमोहले देश फिर्ती गराउने छ। करिब ७ वर्ष ६ महिनासम्म शनिको साढेसाति दशा भोगेका वृश्चिक राशिहुनेहरुलाई पूर्णरूपमा छोड्नेछ । साढेसातीले छोडेपछि सम्पूर्ण कामकारोबारहरु सुचारु हुने छ। त्यस्तै शनिको अढैया दशाले मिथुन र तुला राशि हुनेहरुका लागि फागुन ४ बाट दशा सुरु हुने हँुदा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । लेनदेन बैनाबाट ग्रह निर्माण कार्यमा अवरोध हुनेछ । सावधान रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
धनु, मकर तथा कुम्भ राशि हुनेहरुको क्रमशः अन्त्य, मध्य र आद्धय साढेसाति दशा रहने हँुदा यस्तो अबस्थामा साबधान रहेर काम गर्ने हुन्छ । शनिको दशाले सबैलाई खराब गर्ने भने होइन । यदि अढैया तथा साढेसाति शनिको दशा भएका राशिहरुमा पनि शनिग्रह आफ्नो जम्मलग्न कुन्डलीमा स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि र ३,६,११ स्थानमा शनि भएका हरुलाई भने शनिले राम्रो फल दिने छ । यस्ता व्यक्तिहरुका लागि शनिदेबले शुभ फल प्रदान गर्ने छन् ।शनि खराब अबस्थामा रहेकाहरुलाई शनिको दशामा झुट्टा आरोप लाग्ने आलस्य तथा मानसिक चिन्ता बढ्ने, कामामा ढिलासुस्ती, चोटपटको योग, सन्चित धनको नाश गराउने जस्ता नकारात्मक फल साढेसाती तथा अढैया दशा भएकोबेला प्रभाब पर्ने छ । अनिष्ट फलबाट बच्नका लागि देबीको पुजा स्त्रीहरुको सम्मान शनिको दान पिपलमा जल चढाउने शनिस्तोस्त्रको पाठ गराउने या गर्न जस्ता उपाय अपनाएमा केही अशुभ फलकम हुने ज्योतिषी शास्त्रमा उल्लेख छ।